Ahoana ny fomba ahafahan'ny Semalt Analytics mampisondrotra ny filaharana SEO anao
Raha manana orinasa an-tserasera ianao, dia efa tokony efa zatra ny milina fikarohana fikarohana ianao, SEO. Fitambaran'ireo fomba teknika sy tsy ara-teknika izay ahafahan'ny tranonkala miakatra avo lenta amin'ny valin'ny fikarohana. Ireo tranonkala namboarina ho an'ny SEO dia mahazo mpitsidika bebe kokoa ary noho izany dia mahazo traction bebe kokoa. Google sy Bing no milina fikarohana be mpitia indrindra any. Raha efa nampiasa iray ianao, dia ho fantatrao fa tsy dia mitsidika ilay pejy faharoa ny ankamaroan'ny olona hahitana izay tadiaviny. Noho izany, mahery vaika ny fifaninanana ho an'ny pejy voalohany hanohitra ny teny fanalahidy iray.
Hatramin'ny nisian'ny Web 2.0 dia nahita fivoarana lehibe ny tontolon'ny teknolojia. Tsy vitan'ny hoe manana ny teknolojia vaovao novaina ny fiaraha-monina, izany koa dia mamela ny orinasa sy ny andrim-panjakana handray fanapahan-kevitra tsara rehefa tonga amin'ny dingana fandraisana fanapahan-kevitra lehibe. Ny fanitarana no antony nahatonga azy ireo nanatanteraka izany. Ny rindrambaiko analytic dia nanjaka saika isaky ny sehatry ny varotra sy ny marketing, na dizitaly na hafa koa.
Semalt Analytics dia rindrambaiko analizy matihanina izay ahafahan'ny tompona orinasa an-tserasera an-kalalahana ny manadihady ny azy sy ny toeran'ny mpifaninana aminy momba ny SEO sy ny fahombiazan'ny marketing amin'ny ankapobeny. Ny fampahalalana an-tserasera feno sy voalamina tsara dia ahafahan'ny mpandraharaha sy ny tompon'ny tranokala mahatakatra bebe kokoa: ny dinamika an'ny indostrian'izy ireo, mamela azy ireo handray fanapahan-kevitra tsara sy mialoha ny lalao.
Raha mikaroka rindrambaiko analytics tsara ianao hanampy amin'ny fampivoarana ny toeran'ireo tranonkala SEO, dia Semal Analytics no mety. Ity misy fomba ahafahan'ny Semalt Analytics manampy anao hampiakatra ny laharana SEO anao.
Tombano ny fandrosoana
Ny dingana voalohany hahatratrarana tanjona dia ny fananana sary mazava tsara ny endriky ny lalana mankany amin'ilay tanjona. Midika izany, famaritana tanjona mazava sy fohy hiadiana amin'ny fe-potoana ary hiasa mafy mankany amin'ny lalan'ny fahombiazana. Ho an'ny tranokala, izany dia midika hoe manombatombana ny toerana misy anao ankehitriny ao amin'ny tranokala ary mamantatra fepetra fototra mifandraika amin'ny SEO off-page na on-page SEO.
Ny Semalt Analytics dia mameno anao amin'ny fahaizana manana famakafakana feno momba ny toeran'ny tranonkalanao avy amin'ny toerana fijerena orinasa. Ny rindrambaiko analytic dia manampy anao hahalala ny kalitaon'ny backlink misy anao na ny ao anatiny. Manampy anao hampitaha ny fotoana hampidiran'ny pejinao azy amin'ny mpifaninana aminao izany ary manampy anao hahatakatra bebe kokoa ny momba ny sandan'ny tranokalanao.
Ny fahafantarana ireo metaly ireo dia ahafahanao mamantatra izay tokony hifantohanao sy manampy anao hampiala ny sainao sy ny herinao ao aminy. Raha milaza ny Semalt Analytics fa tsy manana isa avo lenta amin'ny indexing voalohany ianao, dia io no mila mifantoka. Raha toa ka manana backlink amin'ireo tranonkala DA ambony izy, dia holazaina aminao fotsiny ny Semalt Analytics.
Manavao mba hitarika
Ny Semalt Analytics dia manome ny fepetra apetraky ny tranonkalanao ary manampy anao hahatakatra ny soatoavin'ny faritra sy ny tranonkalany mpifaninana. Manampy anao hitandrina ireo modely izay tsy dia hitanao matetika raha misy fampahalalana bebe kokoa momba ny orinasanao, ary hanome anao ny angon-drakitra hitadiavana toerana hanatsarana sy hamoronana fanavaozana alohan'ny fotoana.
Miaraka amin'ny analytics isam-paritra, azonao atao ny mamolavola ny paikadim-pivarotanao amin'ny zavatra izay manome anao vintana mahomby indrindra amin'ny faritra ara-jeografika iray. Manamaivana ny loza entinao izy io ary manome lalana làlana mazava ho anao amin'izay tokony hahitanao azy ary manampy anao hahatakatra ny fomba hahatratrarana azy. Manampy anao amin'ny fizarana am-pitandremana tsara ny loharanon-karena koa izy io, hahafahanao mitahiry ny loharanon-javatrao amin'ny zavatra manan-danja kokoa.
Tohizo ny mpanjifanao
Ny Semalt Analytics dia manome anao mpandresy amin'ny mpifaninana aminao amin'ny alàlan'ny fanolorany ny toerany eo amin'ny tsena mifanaraka amin'ny anao. Fantatrao ny asan'ny mpifaninana aminao sy ny fomba fanaovana azy. Ny analytics dia azo ampiasaina amin'ny fandaminana am-pitandremana ny paikadinao handresena azy ireo amin'ny faritra sasany izay ahafahan'ny tranonkalanao miakatra eo ambony.
Raha vaovao ianao, ny fahafantarana ny fomba fiasan'ny mpifaninana aminao dia ahafahanao mihazona haingana haingana. Raha manapa-kevitra ny hanao fikarohana manokana ianao dia mety maharitra fotoana be. Saingy miaraka amin'ny Semalt Analytics, azonao atao ny mahatakatra ny paikady SEO mpifaninana aminao amin'ny sehatry ny fikarohanao mikendry miaraka amin'ny tsindry vitsy monja.
Ny rindrambaiko analytics koa dia manome anao ny fahafahanao manao ny mariam-pandehanao rehefa mandeha ny fotoana. Mampiasa an'io paikady io ianao dia afaka mandray valin-kafatra amin'ny paikady SEO izay efa misy, ary manangana valin-kafatra izay manatsara ny laharam-pahavitrihana tsirairay avy.
Data ao amin'ny fanaparitahana anao
Miaraka amin'ny Semalt Analytics, afaka manova ny data data an-tsoratra ho endrika tianao amin'ny safidy ianao. Amin'ny tsindry bokotra tsotra, azo aondrana ireo angon-drakitra miaraka amin'ireo endrika Excel sy PDF izay ahafahanao manolotra ny fampahalalana anao amin'ny fomba azon'ny olombelona vakiana ary mamorona fampisehoana ho an'ny ekipanao sy ny mpanjifanao.
Miaraka amin'ny Semalt Analytics, afaka mahazo ny herin'ny analytical be dia be ianao amin'ny volanao. Manana endri-javatra maromaro izy ireo izay mahatonga izany ho safidy tsara ho an'ny filaminanao.
Angamba ny lafiny lehibe indrindra amin'ny SEO dia ny fikarohana keyword. Ny famaritana ny teny fanalahidy mety kendrena sy hampiorina ny tranonkalanao dia tsy azo atao raha fantatrao tsara ny habaka fikarohana. Ny fikarohana ny teny fanalahidy dia dingana famoronana izay mitaky fotoana sy ezaka.
Ny Semalt Analytics dia manome anao hevitra soso-kevitra amin'ny alàlan'ny fandehanana ary mamela anao hahatakatra bebe kokoa ny habaka fikarohana. Miaraka amin'ny soso-kevitr'ireo teny fanalahidy ara-barotra arak'asa, ny dingana ataonao dia afaka mandeha mahomby kokoa
Ny famaritana izay teny hoentina kendrena ho an'ny laharana SEO amin'ny tranonkalanao dia ampahany amin'ny lalao ihany. Ny Search Engine Optimization dia dingana iray tantanan'ny fitsapana sy ny hadisoana. Amin'ny alàlan'ny valin-teny azonao avy amin'ny ezaka SEO ataonao no ahafahanao mamaritra ny fahombiazany. Miaraka amin'ny Semalt Analytics, azonao atao ny manombatanao tsara hoe manao ahoana ny fanaovana ny teny fanalahidy momba ny laharan'ny tranonkalanao. Manome ny isan'ireo mpitsidika izay niantefa tamin'ny pejyo tamin'ny tenimiafina sasany. Manampy anao hamorona votoaty vaovao koa ahafahana manintona ny fivoaran'ny fitadiavana izany.
Ny fahafantaranao ny lanjan'ny marika dia manampy anao hanao hetsika kajy amin'ny tranokalanao. Izany dia ahafahanao mamantatra ny fomba ahitan'ny mpihaino ny tranokalanao, manome anao fahaiza-mitondra amin'ny vokatra na serivisy tsara indrindra. Miaraka amin'ny Semalt Analytics, ny mombamomba ny marika anao dia refesina amin'ny lazany malaza izay manome anao fahafahana hiasa amin'ny paikady orinasa sy hampitombo ny fahatsiarovan-tena araka izay ilaina.
Tantara tamin'ny toerana
Rehefa mampihatra ny paikadinao SEO ianao dia mila metika nomerika hitsara ny toerana misy ny tranonkalanao manodidina ny teny fanalahidy sasany. Ny Semalt Analytics dia manome anao ny fametrahana ny teny fanalahidy ao amin'ny tranonkalanao isaky ny fotoana, mamela anao hahita modely izay mety tsy hitanao amin'ny fomba hafa. Ny fanehoana an-tsary amin'ny fampisehoanao dia afaka manao soa be dia be rehefa miezaka mamorona paikady famoronana vaovao.
Diniho ny mpifaninana
Saika mifanentana amin'ny fifaninanana foana ny habaka fikarohana. Sarotra ny ho tonga amin'ny teny fikarohana izay tsy miady mafy. Ny Semalt Analytics dia manadihady ny mpifaninana aminao ho anao ary manome anao fahatakarana mazava momba ny toerana misy azy ireo amin'izao fotoana izao amin'ny fikarohana; izay toerana matanjaka indrindra ry zareo; ary aiza no misy ny fahazoana maka toerana. Amin'ireny fepetra famakafakana ireny dia afaka mifaninana am-pahatokisana ireo mpifaninana aminao.
Ny milina fikarohana toa an'i Google dia manana endrika miafina izay ampiasain'izy ireo hametrahana tranonkala manohitra ny teny fikarohana. Na dia tsiambaratelo izany algorithm izany, dia misy fepetra voafaritra izay tsy maintsy atrehan'ny tranokala ahafahanao mahazo toerana tsara kokoa. Ny metaly ireto dia misy ny vakiana, ny fifandraisan'ny toe-javatra amin'ny teny mikaroka, ny hafainganana ny vohikala ary ny lafiny teknika maro hafa. Ny Semalt Analytics dia manadihady ny tranonkalanao mba ahafahanao mahazo antoka fa mahafeno ny fepetra SEO tanteraka izy, ary tsy misy tsy ampy amin'ny sehatra fototra.
Ahoana no hanampian'ny Semalt Analytics anao
Midira fotsiny ao amin'ny kaontinao Semalt Analytics ary manomboka ny fizotran'ny angon-drakitra. Hanome anao tatitra momba ny SEO ny tranonkalanao sy ny an'ny mpifaninana aminao ny rindrambaiko. Ny Semalt Analytics dia nanolo-kevitra ny teny fanalahidy momba ny famoronana teny sy teny izay azonao ampiasaina hanamafisana ny laharan'ny SEO anao. Manao izany amin'ny alàlan'ny fanangonana angona isan'andro, manodidina ny haben'ny fikarohana ny tranonkalanao ary manombatombana ny fiheveran'ny mpampiasa sy ny fironana fikarohana mahazatra.
Havaozina isan'andro ny analytics mba tsy hahalalanao ny zava-mitranga ao amin'ny sehatry ny fikarohana anao. Rehefa misy ny sivana isan-karazany, azonao atao ny manakatona ireo teny fanalahidy sasantsasany hahatonga ny fikarohanao hahomby kokoa. Ny endri-javatra toa ny fanangonana ny teny fanalahidy dia mety hampivoatra ny vokatrao koa.
Ny Semalt Analytics dia manome anao koa ny fahazoana angon-drakitra sy analytics ary hamoaka azy ireo amin'ny alàlan'ny tsipika API an'ny Semalt. Amboary tsotra ny fiafarany ary asehoy ny antontan-taratasinao amin'ny loharano nofidinao.
Mba hampivoarana tranokala tsara kokoa amin'ny masinina fikarohana, dia mila tanterahina SEO. Izy io dia fomba famoronana sy teknika izay mitaky fotoana sy ezaka. Miaraka amin'ny Semalt Analytics, ny SEO an'ny tranonkalanao dia azo atao amin'ny fomba mahomby, manome anao fotoana sy fahaiza-manao mifantoka amin'ny paikady sy fanavaozana. Ny Semalt Analytics dia manampy anao hahatratra ny tanjonao SEO miaraka amin'ny fananganana vitsy monja.